SP-G63 120ml Qalabka Farshaxanka leh ee loo yaqaan 'Aromatherapy Diffuser', Shiinaha SP-G63 120ml Soosaarayaasha Xaraashka Alabarka ku shaqeeya
SP-G63 120ml Qalabka Farshaxanka loo yaqaan 'Craft Craft Craft Aromatherapy Diffuser'
120ml Qaliinada Xashiishad Dabacsan ee Xakameysan
2.AROMA HUMIDIFIERS: Awoodda biyaha ee 120mL. Waxay socotaa 4-8 saacadood. U isticmaal diffoobiye saliid ah, mashiinka xashiishka, ionizer, atomizer, nadiifiye, huuriyayaal, hawo-mareen. Habkaan, daaweynta aromatherapy sida tamar-siinta iyo nasashada waxaa si weyn loogu arkaa ikhtiyaar caafimaad oo awood leh.
4. Farsamaynta Xirmooyin Gawaarida Caloosha ah: Qalabkan udiyaar-galka aromatherapy-ga ayaa la socda daboolka cad ee Hollow-carved out iyo saldhig hadhuudh alwaax ah. Naqshad Classic iyo xarrago leh. Qurxin qolkaaga jiifka, xafiiska qolka fadhiga, waxbarista, goobta saqafka, SPA, Yoga, iwm oo kor u qaad jawiga. Waxay sidoo kale noqon kartaa hadiyad weyn qoysaskaaga iyo asxaabtaada.
Waqtiga ugu dambeeya 4-6hours
Cabbirka Cutubka Φ95x173mm
miisaanka Unit 480g
Cabbirka sanduuqa midabka 100 * * 100 245mm
Cabbirka kartoonka 46 * 44 × 33.5cm